स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा फेरि लकडाउन गर्न सिफारिस, सरकारले स्वीकार गरे दशैंमा लकडाउन ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lockdown News/स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा फेरि लकडाउन गर्न सिफारिस, सरकारले स्वीकार गरे दशैंमा लकडाउन !
काठमाडौं । कोरोना संक्रमणको दर लगातार बढे फेरि लकडाउन गर्न सिफारिस गरिएको छ ।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संक्रिय संक्रमितको संख्या २५ हजार नाघेमा फेरि लकडाउन गर्न सिफारिस गरेको मन्त्रालयका सह प्रवक्ता डाक्टर समिरकुमार अधिकारीले न्यूज २४ लाई जानकारी दिनुभयो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको यो सिफारिस सरकारले कार्यन्वयन गरेको खण्डमा दशैँको समयमा मुलुकमा पुनः लकडाउन हुन सक्छ । दशैंंमा काठमाडौँ उपत्यकाबाट धेरै मानिसहरु बाहिरिने भएकाले उपत्यकाका संक्रमित गाउँ गाउँ पुग्ने खतराका कारण पनि सरकारले ‘लकडाउन’ को विकल्प रोज्न सक्नेमा विज्ञहरुको एक मत देखिएको छ ।
मन्त्रालयको ‘इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टम’को बैठकले २५ हजार बढी भए सक्रिय संक्रमित भए बन्दाबन्दी गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । २५ हजार बढी संक्रमित भए अस्पतालको पूर्वाधारमा व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने पनि सह प्रवक्ता अधिकारीले न्यूज २४ लाई बताउनुभयो ।
मन्त्रालयका तथ्यांकअनुसार बुधबार देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या १७ हजार ४ सय १४ छ । यहि दरमा संक्रमित बढ्दै गएमा सक्रिय संक्रमितको संख्या २५ हजार हुन धेरै समय लाग्दैन । न्युज २४ मा यो खबर छ ।
ओली सरकारले सार्वजनिक गर्यो कोरोना सम्बन्धी ५ मह`त्वपूर्ण निर्णय, सबै आजै देखी लागु गरिने ! [सुचना सहित]
लकडाउनका बेला काठमाण्डौका रोडमा घट्यो आनौठो घटना, प्रहरी समेत`लाइ बनायो हैरानी !
निषे`धाज्ञामा अनावश्यक सडकमा निस्किने सवारी साध`नलाई दश हजार स`म्म जरि`वाना हुने !